N95 Mask, kumeso Mask, Kuvhiya Mask, Kurapa Masiki - Nuomigao
Disposable Kurapa Mask
Particate Dziviriro Mask (KN95)
Particate Dziviriro Mask (FFP2)
Vanorasa Vana Masiki
Inoraswa Mask ekudzivirira
Fujian Nuomigao Medical Technology Co, Ltd inyanzvi yekugadzira yehutano hwevanhu uye masiki ekurapa, vachizvikudza seyazvino standardwork, zvigadzirwa zvekugadzira zvepamberi zvinosanganisira otomatiki disposable mask Machine, Automatic N95 mask mashini.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvako iwe, tinokupa ruzivo rwehunyanzvi hwekuyananisa
Isu hatipe iwe kwete zvigadzirwa chete, asiwo yepamusoro-mhando mhinduro uye zvigadzirwa masevhisi
Wana chitupa chekunyoreswa chekurapa, chitupa cheEC uye chitupa cheFDA
Iyo yakagadzira yakakwana dhizaini sisitimu uye yakafara yekutengesa sevhisi, uye yakamisa hukama hwakanaka hwekudyidzana nemabhizinesi mazhinji
Zvimedu (zvemagetsi pamwedzi)
Usatya! Mask kukwanisa kupora
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwemamiriro ezvinhu echirwere, kudyiwa kwemaski kwakawedzera zvakanyanya. Chero imwe maski inogadzirwa inowedzera kuchengetedza kuchengetedza kwevanhu uye vashandi vekurapa. Iwo madhipatimendi anokwanisa uye emabhizimusi ekugadzira anoenderana anomhanya nenguva. Maererano nedatha yazvino, kubva munaFebruary 7, huwandu hwezvekutangazve kwemabhizinesi emasiasi munyika yose zvasvika 73%.
02 2020 / Kubvumbi
chii chatinofanira kuziva nezve masks kupfeka mask? (ita uye usadaro)
penda kunze: inofanirwa kugara munzvimbo nguva dzese: usambofa wakazvikanda pasi kana wabva mukamuri, kana kana kutaura kwako nemurwere kana kungoda kufema zviri nyore chii chinonzi mask chaicho? zvinoenderana nemaitiro emhando yacho: chiyero chekudzivirira (chakaderera, chepakati kana chakakwirira) nyaradzo uye yakakodzera: yakagadzikana yemhino chidimbu tha ...
China maski kudzoreredza nyika: Mask kugadzirwa account yehafu yezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika
Sezvo kuda kwenyika kwemasks kuri kuramba kuchikwira, China inogona kuve zvino zvishoma nezvishoma kudzoreredzwa. Tan Qunhong, maneja maneja kune rimwe kambani inogadzira masiki kuCentral China, akati apedza chirongwa chekutenga nehurumende yeChina uye ave kuita zvekunotengesa zvinhu kunze kwenyika. In additi ...
Runhare: 0086 18616356189